Ngethuba lethu kwihlabathi libi kakhulu imeko yezinto eziphilayo kunye nokuphila okucinezelayo, ngoko kubaluleke kakhulu ukuba owesifazane okhulelweyo asebenzise ukutya okukhululekile.
Kulo lonke ukhulelwe, kufuneka lifumane ngexesha lonke izinto ezifunekayo kunye nezinto ezilandelelanayo. Zonke izondlo zomama ozayo ziphumo ezinamandla, zombini kwisimo sakhe kunye nempilo yomntwana wakhe, kodwa indlela yokutya ngokufanelekileyo ngexesha lokukhulelwa ukuze kungabi ngcono?
Abasetyhini abaninzi bayesaba kakhulu ukunyuka xa bekhulelwe xa bekhulelwe kangangokuthi kuya kuba nzima kakhulu ukulahla iipounds. Indlela yokujongana nale meko? Ingaba kukho iisombululo kulo mbandela ovuthayo?
Ukususela kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, utshintsho lwama-hormone kuwo wonke umzimba luvela kubasetyhini, ngenxa yoko, ekupheleni kweli xesha, abafazi abaninzi abakhulelweyo banenzuzo enkulu yokufikelela kwi-kilogram. Kwimeko enje, ugxininiso oluphambili kufuneka lube kukutshintsha ukutya okuqhelekileyo. Kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, oku kubaluleke kakhulu, kuba kukho ukwakhiwa kokuqala kwazo zonke iinkqubo zamalungu omntwana. Iingcebiso eziphambili, musa ukutywala (nangona kunjalo, ufuna,) kufuneka udle kathathu ukuya kwimizuzu emini, ngaloo ndlela ufumana inani eliqhelekileyo leeprotheni kunye namavithamini. Ukutya ukutya kwiprotheyini, inyama yenkukhu, i-turkey kunye nomdlavuza. Umthombo oyintloko weprotheni yezilwanyana kunye namavithamini ngaphandle kokuba inyama yintlanzi (iqukethe inani elaneleyo le-calcium ne-phosphorus), ubisi, ushizi, i-cottage cheese.
Oomama abaninzi abalindayo bazama ukuphepha ukutya okungaphezulu kweeshukela ukuze bangakhuli, kwaye basebenzise izitishi zentshukela. Ngethuba lokukhulelwa, akukho mfuneko yokusebenzisa i-saccharin, enokubangela ukuba i-malformation ye-congenital yomntwana. I-Sorbitol ayinqatshelwe ukuthatha ngexesha lokukhulelwa, kodwa i-sorbitol iqulethe iikhalori ezininzi, phantse kakhulu njengoshukela. Kukho ukutya okukhethekileyo koomama abalindeleyo.
Ubusika kwizityalo, umxholo wevithamini uyancitshiswa kakhulu (njengoko umgangatho weemveliso uwa). Ngaphandle kokubonisana nogqirha, akufanele uthathe amavithamini ezongezelelweyo, kuba abafazi abakhulelweyo banokuvakalelwa kwamachiza.
Abasetyhini abaninzi banenkxalabo malunga neengxaki ze-toxicosis kwabasetyhini abakhulelweyo. Bahlala bebanjelwa ukuba badle amnandi kwaye banambitha. Zonke eziqulethe iikhalori ezininzi, kodwa umfazi okhulelwe akanakuphikisa ukuthanda ukutya.
Ukulondoloza le meko kunokutshintsha ngokugqithiseleyo ukutya kunye nokutya okudliwe. Kufanelekile ukuzama ukutya umyinge wama-5 ukuya kuma-6 ngamaxesha, kwiindawo ezincinci, kwaye ukwandisa umlinganiselo wetsholongwane owenziwe ngosuku, kulungele ukusela iziselo zendalo zemvelo. Kubalulekile ukutya iziqhamo eziphezulu njengoko kunokwenzeka. Isiqhamo esincedo kakhulu yi-feijoa (esine-iodine nesinyithi), kunye ne-persimmon kunye ne-kiwi. Ukuba ufuna ishukela eninzi ukuba awukwazi ukucinga nantoni na enye, unokuzama ukubuyisela iikhalori ezithandayo kunye nama-apricots omisiwe kunye neidiliya.
Ebudeni bemini, owesifazane okhulelweyo kufuneka, ngokuqhelekileyo, adle ubuncinane ezimbini iilitha zamanzi. Emzimbeni ngexesha lokukhulelwa, i-progesterone eninzi, kunye ne-uterus ekhulayo iyacinezela kwizintso, ngoko ukugqithisa komchamo kuyancipha. Udinga ukusela ngaphezulu ukuhlamba iizintso. I-Fluid iyafuneka kwakhona umntwana, kuba inani le-amniotic fluid kufuneka landise ukuze akwazi ukukhululeka kwaye akhululeke ukuba adide. Ukongezelela, ngeli xesha umntwana sele eqala "ukuhlambalaza," ufuna iindawo eziphilayo ezicocekileyo, ngoko ukutshintshiselwa kwamanzi emzimbeni womama ozayo kufuneka uhambe kakhulu.
Oogqirha abaninzi bancomela abafazi ukuba bangathathi ikhofi ngexesha lokukhulelwa. Enyanisweni, ezimbalwa iikomityi ngosuku, unako ukusela (oku akuyi kulimaza umzimba kunye nomntwana), kodwa ukusela akufuneki. Kubalulekile ukugwema ukuchitha inani elikhulu lekhofi, kunye necoleta, iziphuzo ze-carbonate. Yonke le mveliso inomthamo omkhulu we-caffeine, onokubangela ukukhulelwa kwesisu, kwaye uphinde uqhekeza imetabolism, ukuze uzalise. Akukho nto inokubeka engozini ubomi bomntwana wakho! Ngokuqhelekileyo kulungile ukusela iitayi ezinomhlaza kunye nohlaza, kusekhona amanzi.
Ziziphi iimbumba ezenza inxaxheba ekukhutsheni iibhox ezivela emzimbeni, ngaloo ndlela zikunceda ukuphendula umbuzo wokutya kakuhle ngexesha lokukhulelwa, ukuze ungabuyisanga? Akukho mpendulo ecacileyo kulo mbuzo, kuba amanqaku amaninzi ayiluncedo kumzimba wesifazane okhulelweyo.
Ukuqala ukusuka kwinyanga yesibini yokukhulelwa, kufuneka uqaphele ngokusondeleyo ubunzima bakho. Kucetyiswa ukuba udle i-calcium ethe xaxa kunye nezinye izixhobo ezincedisayo, zama ukugcina ekudleni apho ukhulelwe khona. Ngaphandle koko, umzimba ungasabela kumatshintsho ngokukhawuleza kokungaphumeleli kokutya.
Umthombo omkhulu we-calcium yimveliso yobisi, ngoko uzame ukuyisebenzisa, nangona kunjalo, ungalibali ukuba uzama ukugcina ubunzima bakho. Ngethuba lokukhulelwa konke kuyakunceda ukuthatha i-eggshell kwifom echanekileyo.
Ukungazalisekanga kukho indlela egqibeleleyo yokuphuma: ungadla uhlobo oluthile lweentlanzi. Ukusuka kwiintlanzi, njengoko uyazi, musa ukuthotywa, kodwa ngumkhiqizo ohlwaya kwaye unomsoco onomxholo ophezulu we-phosphorus. Iintlobo zoncedo kunye nezohlwaya zeentlanzi zaselwandle: i-salmon epinki, i-salmon, i-salmon kunye ne-tuna. Xa kuthelekiswa nenyama entlanzi kuncinci kakhulu, kuya kuba lula ukuyigaya. Kukulungele ukutya iintlanzi eziphekwe ngumbini okanye uzonkwa ngemifuno.
Ukuba ufuna ukuba nesibalo esincinci, kufuneka udibanise iintlobo zamavithamini kwixesha lokutya kwansuku zonke. Ekubeni iivithamini ngexesha lokukhulelwa lidlala indima ebalulekileyo. Ukususela kwiintsuku zokuqala zokukhulelwa, umzimba wesetyhini udinga ngokukhawuleza i-vitamin E. Unomphumo oncomekayo ekukhuleni kweethambo zesifuba, ngaphandle koko ukhusela ngokuqinisekileyo kwimeko yokukhulelwa kwesisu. Le vithamini ifumaneka kwizinto ezininzi zokutya ezibandakanya, kwioli, inantambo, imbewu, kwiingqolowa zengqolowa ehluma. Ukukhulelwa okonwabileyo!
Izixhobo zokulahlekelwa kwesisindo emva kweminyaka engama-40
Yidla ukuze ukwandise ubomi bakho
Ixesha lokubeleka lihle kakhulu
Ukuphulukiswa kunye nemilingo yamatye
Iibhatyi zamabhinqa eziphathekayo, iAntumn-yeHlabathi 2015-2016 (ifoto)
Umhla wokuqala: indlela yokuba nendlela yokujonga ngayo
Ukukhanya okuhlanu kunye nokukhawuleza ngokukhawuleza kokufika ngokukhawuleza kweendwendwe
Indlela yokususa amanzi entle?
Indlela yokulahla iindawo zokudala